Tani waa isbarbardhigga u dhexeeya baytariyada dhammaan noocyada iPhone 13 | Wararka IPhone
Tani waa isbarbardhigga u dhexeeya baytariyada dhammaan noocyada iPhone 13
IPhone 13 -ka cusub wuxuu soo bandhigay sheekooyin muhiim ah oo heer ah hardware. Waxyaabaha cusub waxaa ka mid ah A15 Bionic chip cusub oo kor u qaadaya 6-core CPU cusub, 4 ama 5-core GPU oo ku xiran nooca iyo 16-core Neural Engine. Intaa waxaa dheer, soo -bandhigga cusub ee Super Retina XDR ayaa ka waxtar badan oo u oggolaanaya isticmaalka tamar yar. Isku -darkaan ee qalabka ugu horreeya Waxay u oggolaatay baytariyada iPhone 13 inay noqdaan kuwo tayo leh oo kordhiya madax -bannaanida marka loo eego iPhone 12. Marka xigta waxaan falanqeyn doonnaa nolosha batteriga ee xadka cusub ee iPhone.
Batariyada iPhone -ka cusub ee 13 si loo barto
Muhiimadda madaxbannaanida aaladda ayaa fure u ah go'aaminta in la iibsado iyo in kale. Marka laga hadlayo iPhones, Apple waxay xooga saareysaa soo bandhigideeda hagaajinta batteriga marka loo eego jiilkii hore. Kordhinta nolosha batteriga waxay ku imaan kartaa laba siyaabood. Marka hore, kororka xajmiga batteriga bixinta karti weyn sidaas darteedna waqti dheer isticmaal. Ama labaad, yaraynta isticmaalka aaladda taas oo ka dhigaysa mid aad waxtar u leh soo saarista hoos u dhaca isticmaalka.
Apple, madaxbannaanida aaladeeda waxaa lagu cabiraa waqtiga dib -u -ciyaarista fiidiyaha, qulqulka fiidiyaha iyo dib -u -ciyaaridda maqalka. Xaqiiqdii, marka loo eego xogta rasmiga ah iPhone 13 iyo 13 Pro Max waxay leeyihiin 2,5 saacadood oo dheeraad ah oo ismaamul ah iyo iPhone 13 mini iyo iPhone 13 Pro 1,5 saacadood oo dheeri ah marka loo eego dhiggooda iPhone 12.
Kani waa miiskii baytariyada iPhone 13 lagu barbar dhigo xogta rasmiga ah ee Apple. Dabcan, qiimaynta ugu dambaysa waxaa samayn doona dadka isticmaala marka ay bilaabaan isticmaalka aaladaha maalin kasta. Sidoo kale Hadhsan in la arko awoodda baytariga isbarbar dhiga haddii ay kordheen iyo haddii kale marka loo eego iPhone 12.
Muuqaal Video ah Ilaa 17 saacadood Ilaa 19 saacadood Ilaa 22 saacadood Ilaa 28 saacadood
Socodka fiidiyaha Ilaa 13 saacadood Ilaa 15 saacadood Ilaa 20 saacadood Ilaa 25 saacadood
Daar codka Ilaa 55 saacadood Ilaa 75 saacadood Ilaa 75 saacadood Ilaa 95 saacadood
Lacag deg deg ah Illaa 50% ayaa lagu dallacayaa 30 daqiiqo iyadoo leh 20W ama adapter sare Illaa 50% ayaa lagu dallacayaa 30 daqiiqo iyadoo leh 20W ama adapter sare Illaa 50% ayaa lagu dallacayaa 30 daqiiqo iyadoo leh 20W ama adapter sare Illaa 50% ayaa lagu dallacayaa 35 daqiiqo iyadoo leh 20W ama adapter sare
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Tani waa isbarbardhigga u dhexeeya baytariyada dhammaan noocyada iPhone 13
Podcast 13x04: Keynote Apple, wax badan oo aan waxba ka jirin.
IPhone 13 -ka cusub wuxuu leeyahay laba taageero eSIM